Gudiga iskuulka wuxuu ansaxiyay in lagu daro fasalada Brookview | Faahfaahinta Wararka Degmada - Dugsiyada Dadweynaha ee Harta Biyaha ee ISD 834
Shaqada naqshadeynta mashruuca ayaa isla markiiba bilaaban doonta, iyada oo dhismuhu bilaabmi doono xagaaga dambe oo sii socon doona deyrta. Kordhinta cusub waxay diyaar u noqon doontaa ardayda bartamaha sanadka 2021-2022 ama bilowga sanad dugsiyeedka 2022-2023.
Brookview, oo la furay 2017, waxaa la dhisay iyadoo maskaxda lagu hayo. Dheeraadku waxaa laga wada hadlay marar badan dhowrkii sano ee la soo dhaafay, waxaana loo aqoonsaday inay tahay mudnaanta koowaad kooxda Kooxda Naqshadeynta Bulshada oo qayb ka ah geeddi-socodka qorshaynta xarumaha fog ee sannadka 2019-2020.
Xitaa marka lagu daro, degmadu wali waxay wajihi doontaa caqabado dhanka boosaska ah oo ka jira labada dugsi hoose ee Brookview iyo Lake Elmo taasoo ka dhalatay koritaanka labadaas bulsho. Deyrtan, guddi waxay tixgelin doonaan wax ka beddelka xuduudaha kaqeybgalka dugsiga si si wanaagsan loogu dheelitiro diiwaangelinta dhammaan 7da dugsi hoose ee degmada. Isbadal kasta oo xuduudeed oo ay ansixiyaan guddiga iskuulka waxaa loo hirgelin doonaa bilowga sanad dugsiyeedka 2022-2023.
Guddiga dugsigu wuxuu u codeeyay Abriil 8,2021 inay adeegsadaan ikhtiyaar ikhtiyaari kiradeed oo aan ka badnaan $ 7.2 milyan si loogu maalgaliyo ballaarinta. Mashruuca waxaa lafilayaa inuu ku kaco cashuur bixiye degmo leh celcelis guri qiimahiisa kayar yahay $ 15 sanadkii. Lacagtaas waxaa lagu sii yarayn karaa iyadoo laga helo iibinta guryaha kale ee degmada.